BlackArch Linux 2019.06.1 Zvino Inowanikwa ne150 Zvishandiso Zvitsva | Linux Vakapindwa muropa
Vhiki rino iwe tataura kubva pakuburitswa yazvino vhezheni yeKali Linux, kugovera kunonzi "kutsika tsika" kune ese maturusi ainosanganisira. Nezuro kumwe kuburitswa kweimwe distro yerudzi urwu yakaburitswa: NhemaBlackArch Linux. Iyo Kali Linux inogadziridzwa yakaburitswa svondo rino haitaridzike seinonyanya kukosha, chinonyanya kukosha ndechekuti yayo NetHunter yatovepo pane anopfuura makumi mashanu emidziyo (Android), asi isu hatigone kutaura zvakafanana kune idzva vhezheni yetsika yekubavha kugovera yakaburitswa. .
Kutanga, BlackArch Linux 2019.06.1 inosanganisira pamusoro zana nemakumi mashanu maturusi ekuyedza (ahem, hack) kuchengetedzwa kwemidziyo, network, nezvimwe. Kuti uenderere mberi, iyo kernel yakagadziridzwa kune yazvino vhezheni yakagadzika, ndiko kuti, kuLinux 5.1.4, pamwe neyekushandisa sisitimu yekuisa kune vhezheni 1.1.1. Kune rimwe divi, iyo "jedi-vim" plugin yawedzerwa iyo inopa iyo jedi yekupedzisa raibhurari kune VIM mupepeti, pamwe nemamwe akati wandei akagadziridzwa VIM plugins.
BlackArch Linux 2019.06.1 inosvika neLinux 5.1.4
Izvo nekuwanda kwayo kunonzwisiswa kuve iyo June 2019 kuburitswa kubva kuBlackArch Linux, kunyangwe isu tichiri muna Chivabvu, inouyawo nerutsigiro rwe txvt-unicode y Xresource, xdefaults, zvishandiso, mafaira ekumisikidza, kernel mapakeji uye mamaneja emaneja mamenesi eAwesome, Flubox uye Openbox yakagadziridzwa. Sezvo zvinogona kutarisirwa pamwe nekumwe kugadzirisa, madhiragi akave akagadziriswa kunatsiridza hwese mashandiro ehurongwa uye kuvimbika.
Iyo vhezheni itsva inowanikwa pane iyo kurodha peji kubva kuBlackArch Linux. Kufanana nekumwe kugoverwa kweLinux, inogona kushandiswa muRarama mode, iyo ichatibvumidza kuti tirege kuiisa pakombuta uye nekuishandisa chete kana isu tichida "kuyedza" kuchengetedzwa kwechigadzirwa. Uye ndezvekuti, kunyangwe zvichiratidzika kuti kwete, nekuda kwekuparadzirwa kwakadai (Wifiway) ini ndakachinja mapassword uye yekuchengetedza protocol yemirairi angu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » BlackArch Linux 2019.06.1 Iye zvino Inowanikwa ne150 + Zvishandiso Zvitsva
Waini 4.9: iyo nyowani vhezheni yakaburitswa zviri pamutemo
IUS inogona kubvisa iyo inorambidzwa paHuawei kana vakasvika pachibvumirano